काबुल विमानस्थलमा अमेरिकी सेनाले च,लायो गो,ली, के गर्दैछ तालिवान ? – Dainik Sangalo
काबुल विमानस्थलमा अमेरिकी सेनाले च,लायो गो,ली, के गर्दैछ तालिवान ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ समय: १२:४९:२५
काठमाडौं । अफगानिस्तानको काबुलस्थित विमनस्थलमा अमेरिकी सेनाले गो, x ली चलाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार सोमबार विमानस्थलमा मुलुक छा, x ड्नेको ठूलो भी,ड देखिएको अवस्थामा अमेरिकी सेनाले गो, x ली चलाएको हो ।
तालिबानले पुनः अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा लिएसँगै अफगानिस्तानबाट मानिसहरु बाहिरिन विमानस्थल पुगेका छन् । अत्यधिक भी,डको कारण अहिले काबुलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अस्तव्यस्त देखिएको छ ।
‘मलाई यहाँ धेरै ड,र लागिरहेको छ । धेरै हवाई फा, x यरहरु भइसकेका छन्’, एक प्रत्यक्षदर्शीले एएफपीसँगको कुराकानीमा भने । डेलिमेलका अनुसार काबुलको विमानस्थलमा गो, x ली च, x लेसँगै सैन्य उडानबाहेकका सबै उडान रद्द गरिएको छ । अहिले विमानस्थललाई अमेरिकी सेनाले सुरक्षा दिइरहेको छ । साथै उसले अफगानिस्तानको एयर ट्राफिक कन्ट्रोललाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अहिले हजारौंको संख्यामा अफगानी नागरिकहरु पनि मुलुक छाड्न विमानस्थलमा पुगेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा विमानस्थलको गेटमा मानिसहरुको ठूलो भीड देख्न सकिन्छ । केही यात्रुहरुलाई उडान रद्द गरिएसँगै विमानबाट नि,का,लिएको देखिएको छ । अफगानी व्यवसायी सोएइब बाराकले आफूलाई काम एयरको फ्लाइटबाट नि,का,लिएको बताएका छन् । उनका अनुसार विमानस्थलमा गो, x ली च,लेसँगै उडान रद्द गरिएको हो ।
Last Updated on: August 16th, 2021 at 12:49 pm